Ny fijerena ny fomba famakiana ny lahatsoratra dia miaraka amin'ny קריאות סטטיסטית Word
Alao sary an-tsaina ny fahasamihafan’ny mpihaino anao. Ny olona voalohany mitsidika ny tranokalanao dia mety hamaky amin’ny ambaratonga oniversite ary mahatakatra teny lehibe, fa ny mpitsidika tranokala manaraka dia mety mila rakibolana mba hahalala ny zavatra lazainao. טנה mahakivy izany ary eo amin’ny tontolo an-tserasera, izay tian’ny olona ny fampahalalana eo no ho eo, ny tranga vaky ny mpamaky iray mandany fotoana hikaroka teny tsy mahazatra dia somary mangatsiaka ihany. Mamadika mpamaky fotsiny ianao.
Tsy vitan’ny hoe zava-dehibe ny fijerena ny haavon’ny fanoratanao, fa te hahazo tsara ianao fa mora vakiana. Ny antontan’isa mora vakiana momba ny teny dia fomba איראי ahafahana miantoka ireo lahatsoratrao izay tsy vitan’ny fisintonana ny sain’ireo mpamaky rehetra anao, fa ny fitandreman’izy ireo hatrany.
1.1 מלומזה וליני
1.2 נייר נייר
1.3 נתונים סטטיסטיים על קריאות
Na dia mahay mamaky aza ny mpamaky anao, tsy midika izany fa tokony ho sarotra ny mamaky ny fanoratanao. Ny tanjona amin’ny ankamaroan’ny endrika fanoratana dia ny mandresy lahatra na hampahafantatra. Na izany aza, met ho ho sarotra indraindray ny mametraka ny tenanao ao anatin’ny kiraron’ny mpamaky.
תוספי Mametraka mifandraika amin’ny בלוגו של וורדפרס. Manontany fotsiny raha mora vakina ny lahatsoratra. En sa sa tsia.
Mangataka fanamarihana ao amin’ny fizarana tsetsatsetsa. הוויטרה צארה איזאני סאטריה azon’ny mpamaky manome tsipiriany manokana.
Manaova טוניאן-דהטסורטרה matihanina mba hijery ireo lahatsoratrao ary hanome hevitra anao hahatonga azy ireo ho mora vakiana kokoa.
Misy fitaovana an-tserasera tsara iray antsoina hoe papier Paper Rater izay ampiasaiko indraindray handinihana ireo lahatsoratra ireo, indrindra raha reraka aho rehefa manoratra na amin’ny fe-potoana haingana izay tsy mamela ny fanoviratrara matara matrara matika a mata Paper Rater ity manaraka ity:
Mandinika ny haavon’ny פיאנרנה. Azonao atao ny mametraka ny haavon’ny fanabeazana avy amin’ny kilasy voalohany amin’ny alàlan’ny sekoly fianarana diplaoma.
Hamarino ny fiandohany. Met hahasoa izany raha manova ny asan’ny olon-kafa ianao ary tsy mahazo antoka raha voadona ilay izy.
הטוב מכולם? Ny mpanolotra taratasy dia afaka amin’ny dikan-teny fototra. Raha te hahazo dikan-doka tsy misy adirey ianao, Dia afaka mampiasa vola ao amin’ny Premium Paper Rater.
נתונים סטטיסטיים על קריאות
Mihoatra noho ny azo inoana, Dia efa mampiasa safidy fanamarinana ny fitenin’ny teny ianao. Na izany aza, a Arizonao atao koa ny manome lalana ny Flesch קרא את Ease sy Flesch-Kincaid Level Level בין Microsoft Word.
Kitiho ny safidy (אמיריית ניו יורק סרי etsy)
Rehefa vita ny safidy vaovao dia tsindrio eo amin’ny "פיחואנה" eo amin’ny ilany havia (ג’רוי ניו סרי etsy ambany).
Eo ambanin’ilay fizarana mitondra ny lohateny מעדר "Rehefa ny fitipi-pitenenana sy ny fifehezana amin’ny teny" דיא טוניה האנמרינה הסירה רואה.
Kitiho ny boaty "בסדר".
Ny fanamarinana ny haavo an’ny kilasin’i Flesch-Kincaid dia manazava tsara. הו hitanao amin’ny santionany etsy ambony fa ny soratra dia amin’ny 9.3 na volana fahatelo amin’ny taona fahasivy. Mba hahazoana ny atiny ho amin’ny ambaratonga ambaratonga fahavalo, izay tiako, dia afaka manaisotra fotsiny ilay teny hoe "mahafinaritra" aho izay mitondra azy amin’ny isa 8.8.
Ankehitriny, ny fahatakarana ny isa amin’ny Flesch קריאה dia סארוטרה סומרית, singy tsy sarotra loatra. Ny Microsoft dia manazava amin’ny antsipiriany momba io